IXiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus: Ukucaciswa kunye nomhla wokubonisa uvuza | I-Androidsis
Njengoko i-2018 isondela, ukuvuza kuyanda. Into eyenzekileyo kwakhona entsha Xiaomi iiflegi. Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo kuthethwe kakhulu malunga Xiaomi Mi 7, Isiphelo esitsha esiza kuboniswa kwiinyanga zokuqala zika-2018. Ngoku, zonke ii iinkcukacha zesixhobo.
Nangona ayizukuza yodwa kwintengiso. Kuba iXiaomi Mi 7 Plus nayo izakufika. Ukucaciswa kunye nomhla wokubonisa kwezi zixhobo zimbini sele zivuziwe ngokupheleleyo. Yintoni esinokuyilindela kwiifowuni zesiphelo esitsha sophawu?
Zombini ezi modeli zininzi ngokufanayo. Inyaniso, umahluko ophambili uya kuhlala kubungakanani besikrini. Ubuncinci yile nto i-specs ezivuzayo ngeli xesha zijongisa kuthi. Kodwa, siphambi kweefowuni ezimbini ezithembisa ukunika imfazwe eninzi kwi-2017. Sishiya nawe iinkcukacha zakho ke
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus
2 Umhla wentetho kunye nexabiso Xiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus
Kulindeleke ukuba enze njalo IXiaomi Mi 7 ine-5,65-intshi yesikrini. Okwangoku yena I-7 Plus yam iya kuba nescreen esine-intshi ezi-6. Zeziphi ezi modeli ziya kufana Umlinganiselo we-18: 9 kunye nesisombululo se-FHD +. Ke uphawu lwaseTshayina luyenza icace gca ukuba bazinikele ngokupheleleyo kwizikrini ezingapheliyo kunye nomgangatho olungileyo womfanekiso. Akunakuba kuncinci kuye.
Into esele iqinisekisiwe kwiveki ephelileyo kukuba zombini ezi zixhobo iya kuba ne-Snapdragon 845 njengeprosesa. Ke ngoko, sinokulindela amandla amaninzi kunye nokusebenza kakuhle. Ngokubhekisele kwi-RAM, zombini ezi nguqulelo iya kuba ne-6 GB ye-RAM. Akukho nto ityhiliweyo okwangoku ngaye ukugcinwa kwangaphakathi yale Xiaomi Mi 7. Kuya kufuneka silinde.
Ibhetri yenye into apho kuya kubakho umohluko. IXiaomi Mi 7 iya kuba nebhetri ye-3.200 mAh. Ngelixa umntakwabo omdala eza kuba nebhetri enkulu, ye 3.500 mah. Umahluko obonakalayo onokubaluleka ekuzimeleni kwesixhobo.
Kukwabonakalisiwe ukuba zombini ezi modeli ziya kuba nekhamera engasemva eyi-12 + 20 MP. Eyokuqala yee-sensors iya kuba Sony IMX380 (enye eneGoogle Pixel XL 2), ngelixa yesibini iya kuba Sony IMX350. Ke kuyabonakala ukuba iXiaomi Mi 7 iya kuba sesinye sezixhobo ezibalaseleyo kwicandelo lokufota kunyaka ozayo, ukuba ngaba ezi data ziyinyani.
Umhla wentetho kunye nexabiso Xiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus
Kuninzi okuye kwahletywa malunga nokunikezelwa kwezixhobo ukuza kuthi ga ngoku. Imithombo yeendaba emininzi ibonakalise ukuba iya kuba yiyo YeHlabathi yeNational Congress umzuzu okhethelwe intetho. Nangona inyani ibonakala yahlukile. Kuba uluvo lukaXiaomi lolunye kwaye lunomdla kakhulu. Bakhethe ukwenza umsitho olandelayo oza kwenzeka ngo-Matshi 2018. Kuya kubakho umsitho apho baya kuthi babonise zombini iimodeli.
Ngelo xesha eyona ndawo okanye umhla walo msitho wenziwe yinkampani awaziwa. Nangona ngokuqinisekileyo siza kwazi ngakumbi idatha kwiiveki ezizayo.
Iinkcukacha zamaxabiso ezi modeli zimbini zikwabonakalisiwe. Nangona olu lwazi alukhuselekanga. Kodwa kuyasinceda ukuba sibe nombono ombi malunga namaxabiso eeflegi ezintsha zeXiaomi. Kulindelwe ukuba Ixabiso leXiaomi Mi 7 likwi-2.699 yuan, malunga ne-350 euro. Ixabiso le I-Xiaomi Mi 7 kunye ingangaphezulu kancinci, i-2.999 yuan. Kule meko lixabiso malunga 390 euro.
Malunga nale datha evuzayo namhlanje Akukho siqinisekiso sokuba zinyani nge-100%. Nangona banokubakho, kodwa okwangoku akukho siqinisekiso sivela kwinkampani. Ke kuyakufuneka silinde ukuba yenzeke. Ukuba yinyani, ezi datha zisibonisa oko sijongane nezixhobo ezibini ezithembisa kakhulu. Kwaye ngokuqinisekileyo banakho ukuba ngabathengisi abathengisayo kwimarike. Ucinga ntoni ngezi Xiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ulungelelwaniso lweenkcukacha kunye nomhla wokubonisa weXiaomi Mi 7 kunye neMi 7 Plus
Utata uPacho Pérez Suárez sitsho
Ndiyayithanda i-Plus kunye nee-intshi zayo ezi-6 ...
Kuya kufuneka simlandele ngokusondeleyo…
Phendula ku-P. Pacho Pérez Suárez
Iimaphu zikaGoogle ziya kukwazisa xa kufuneka uphume kwizithuthi zikawonkewonke